Norway inoongorora kana Tidal anga achinyepera huwandu hwayo kwemwedzi | IPhone nhau
Zvinyorwa, vashandisi vanoshanda, vashandisi vanobhadhara ... Hazvishamise kuti makambani arambe achitaura nezve "nhamba" idzi. Izvi zvinodaro nekuti iyo data yakawanikwa ndiyo inotsigira mashandiro emaapplication ako uye anodudzira mumanyuko emari nekuda kwekudyara kwetekinoroji gurus.
Tidal agara akafukidzwa nezvakavanzika, ikozvino Norway iri kudzidza kuti Tidal iri kunyepera data rayo rekutarisa. Izvi zvinogona kuve nyonganiso nyowani kumakambani eetekinoroji kana zvikaratidzirwa, kunyanya zvine chekuita nemari dzekudyara mune ramangwana kana nzira yekuzvipa mari.
Dagens Næringsliv ndiyo svikiro rakataura nezvaro iyo ingangoita kuferefetwa kuri kuitwa nezviremera zvenyika yeNordic paTidal, iyo sezvaunonyatso ziva ndeye yekumhanyisa mimhanzi yekuberekesa sevhisi iyo inozivikanwa neakakwira mhando yeiyo kubereka iyo yaanopa. Nekudaro, kubva kuna Tidal ivo vakakurumidza kuramba chikuru:
Tidal haisi kuongororwa. Isu tanga tiri mukutaurirana kwakananga nehurumende yeNorway kubva pakutanga kwebasa redu. Takapa magwaro anodiwa kuzviremera uye ivo havana kumbobvira vatibvunza mhinduro kana chero chiratidzo chekuferefeta. Svikiro iri ratopomera nhema dzakati wandei nezvesevhisi yedu, uye tinovimba kuti munhu ari kupomera achatora mutoro wezviito zvavo. Hatigone kutaura zvekare pamusoro penyaya iyi panguva ino.
Muchidimbu, zvinoenderana nekupomerwa kwaTidal kwaizove kuri "kuwedzera" manhamba maererano nenhamba yevashandisi vakabhadharwa yainayo, pamwe nezvinyorwa zvavanoita kuburikidza nebasa. Iye anoedza kuti izvi hazvisi kuzove zvakapfuura kutanga kwemutambo mutsva padanho re data, manyepo nemakakatanwa munyika yehunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Norway inoongorora kana Tidal anga achinyepera huwandu hwayo kwemwedzi
Instagram inogadziridza kugadzirisa resolution yeiyo iPhone XR uye XS Max